कसरी निलम्बन अपील मा डलर हजारौं खर्च बिना निलम्बन रडार बन्द रहन।
सबै विक्रेताहरु लाई थाहा छ कि अमेजन को नीतिहरु सख्त दिन प्रति दिन विशेष गरी जब बिक्रेताहरु DropShipping गर्दै छन्। एक+ विक्रेता सुरक्षा निष्क्रियता को संभावना कम हुनेछ र तपाइँ खाता स्वास्थ्य सम्बन्धित मुद्दाहरु मा तुरुन्तै अभिनय गरेर एक किनारा दिनुहुनेछ।
किन A+ विक्रेता सुरक्षा महत्वपूर्ण छ?
सबैलाई थाहा छ कि अमेजन निलम्बन वास्तविक सम्झौता हो। १० मध्ये ३ खाता एकाधिक अपील पेस गरे पछि पनि सक्रिय हुदैनन्। यदि एक खाता निलम्बित छ, तपाइँ $ 3k -$ 10k प्रत्येक निलम्बन मा खर्च गर्नुहुन्छ, र अझै पनी, त्यहाँ छैन GUARANTEE कि तपाइँ सक्रिय हुनुहुनेछ। A+ विक्रेता संरक्षण तपाइँको समय र पैसा बचाउनेछ, र यो निलम्बन को chances०% को लागी तपाइँको संभावनाहरु लाई कम गर्दछ जुन प्रत्येक विक्रेता खोजिरहेको छ। एक+ विक्रेता संरक्षण सबै अमेजन विक्रेताहरु को लागी एक लाइफलाइन को रूप मा कार्य गरीरहेको छ।
निलम्बन को संभावना %०% घट्यो
सबै नीति उल्लtions्घनहरु लाई तुरुन्तै निलम्बन गरिनेछ जो निलम्बन को संभावना लाई स्वचालित रूप बाट कम गर्दछ
उत्कृष्ट स्थिति मा खाता स्वास्थ्य
बिन्दु शिपिंग प्रदर्शन र ग्राहक सेवा प्रदर्शन उत्कृष्ट स्थिति मा खाता स्वास्थ्य राख्नेछ
भविष्य निलम्बन को लागी कवरेज
यदि तपाइँ तुरुन्तै सबै मुद्दाहरु संग व्यवहार पछि निलम्बित पाउनुहुन्छ। तपाइँ भविष्य निलम्बन को लागी कभर गरिनेछ।
हाम्रो साथ सुरु गर्नुहोस्
२ भन्दा कम नीति उल्लtions्घन वा खाता मा AZ दाबी।
खाता स्वास्थ्य क्लीनअप
प्राप्त गर्न को लागी अवसर छोड्नुहोस्
छिटो हुनुहोस्- यो प्रोमोशनल प्रस्ताव मा समाप्त हुनेछ:
के तपाइँ यो योजना को बारे मा एक प्रश्न छ? हाम्रो सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्नहरुको लागी तल सूची हेर्नुहोस्। यदि तपाइँको प्रश्न यहाँ सूचीबद्ध छैन, तब कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के म साइन अप गर्न सक्छु? यदि मँ खाता मा २ भन्दा बढी नीति उल्ल्घन छ?
हो, तपाइँ पहिलो4महिना को लागी एक अतिरिक्त प्रीमियम तिर्नु पर्छ।
अतिरिक्त प्रीमियम सर्तहरु bellow व्याख्या गरीएको छ :
3-5 उल्लंघन: $ 49
6-10 उल्लंघन: $ 99
11-15 उल्लंघन: $ 149
16-20 उल्लंघन: $ 199
यदि म योजना संग हस्ताक्षर गरे पछि निलम्बित हुन्छु, के मैले कुनै शुल्क तिर्नु पर्छ?
तपाइँले मात्र हाम्रो छिटो योजना ($ 100४)) को लागी १०० डलर सेवा शुल्क र प्रीमियम योजना को लागी $ २०० ($ १२)) तिर्न आवश्यक छ।
के हुन्छ यदि म यो योजना को सदस्यता लिए पछि एकै महिना मा निलम्बित हुन्छु?
तपाइँ कम से कम6महिना को लागी निलम्बन को लागी कभर प्राप्त गर्न को लागी सदस्यता हुनु पर्छ। यदि तपाइँ6महिना भन्दा पहिले निलम्बित हुनुभयो भने तपाइँ हाम्रो अपील पत्र प्याकेज को मात्र 1/3 तिर्न को लागी आवश्यक पर्दछ।